RASMI: Bonucci oo berri tarabuunka ka daawanaya kulanka Porto-Juve kaddib markii ay afgaareen Allegri – Gool FM
RASMI: Bonucci oo berri tarabuunka ka daawanaya kulanka Porto-Juve kaddib markii ay afgaareen Allegri
Raage February 21, 2017
(Porto) 21 Feb 2017 – Max Allegri ayaa xaqiijiyay in Leonardo Bonucci laga cunay kooxda Juventus ee habeen dambe wajahaysa Porto wareegga 16-ka gegada Estadio do Dragao “si loo xushmeeyo Juventus, maamulka iyo taageerayaasha.”
Macallin Allegri iyo Bonucci ayaa Jimcihii is af gaarey iyadoo ay ka dheedheeraatay kulankii ay 4-1 uga adkaadeen kooxda Palermo iyadoo horayba loo hadal hayay in la kaydin doono, waxaana mar sii horreeysey oo fiidkan ah lagu arkayay Estadio do Dragao daafaca Bonucci oo kaydka fadhiya isagoo telefoonkiisa wax ka dhegeysanaya, halka Allegri iyo laacibiinta kale ay garoonka ku jireen.
“Berri Bonucci tarabuunka ayuu fuuli doonaa. Taasi kama dhigna inaan arrinta ka badbadinayno. Balse waxaan xushmaynaynaa maamulka, taageerayaasha iyo kooxda, isna waa wiil caqliloow ah oo wuu nala fahmay go’aankaas.” ayuu yiri Allegri.
Suso oo qandaraas cusub loo bandhigayo jeer mushaarkiisa la jibbaarayo!
DAAWO: Goolasha kulankii waalida ahaa ee xalay dhex maray Man City iyo Monaco